मद्दत मार्केटिंग विद्रोह | Martech Zone
पहिलो पटक मैले भेटे मार्क स्चेफर, म तत्कालै उनको अनुभव र गहिरो अन्तरदृष्टि को सराहना गर्दै थिए। मार्कले अग्रणी कम्पनीहरूसँग कसरी उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासहरू सुधार गर्ने काम गर्दछ। जबकि म यस उद्योगमा एक सक्षम व्यवसायी हुँ, म दृष्टिका लागि मुठ्ठीभर नेताहरूतिर हेर्छु - मार्क ती नेताहरू मध्ये एक हुन् जुन मैले ध्यान दिएँ। जबकि मार्क मार्केटिंग को एक अनुभवी अनुभवी हो, म पनि सराहना गर्छु कि उनी सोशल मिडिया मार्केटिंगको साथ पहिलो ठाउँमा उफ्रिए।
मेरो मार्क मेरो थियो Martech Zone साक्षात्कार पोडकास्ट, उनलाई एक कार्यक्रम मा भेटे, र एक मित्रता वृद्धि भयो। उहाँ एक राम्रो साथी हुनुहुन्छ, आफ्नो दृष्टिकोणमा अप्रसिद्ध, तपाईलाई सुन्न गराउन तपाईलाई के आवश्यक छ। हामीले यसमा मिलेर काम गरेका छौं डेल ल्युमिनरीज पोडकास्ट जहाँ मार्क र डेलको बी2बी प्रभावकारी मार्केटिंग र सामग्री निर्माण नेता कोन्स्टान्जे एलेक्स, डेल टेक्नोलोजीहरु आफ्नो ब्रांडहरु अन्तर्गत छ कि अद्भुत प्रतिभा हाजिर गर्न को लागी एक अवसर देखे। मैले यस जस्तो पोडकास्ट श्रृंखला कहिले पनि गरेको थिएन र मार्कले मलाई अनुसन्धान गर्न र एक अद्भुत शो उत्पादन गर्न धकेला। मसँग मौका लिनु भएकोमा म उनीलाई कहिल्यै भुक्तान गर्न सक्दिन!
त्यसोभए, मेरो आश्चर्यको कल्पना गर्नुहोस् जब मैले मेलमा प्याकेज प्राप्त गर्छु स्केफर मार्केटिंग समाधानहरू। बक्समा सामग्रीहरूमा विन्डो थियो,aमार्केटिंग विद्रोही लेबल
मैले बक्स खोले र भित्र एउटा अनौंठो किट थियो, के देखिन्थ्यो, असम्बन्धित ट्रिन्केट वा सुराग:
यदि तपाईं राम्ररी हेर्नुभयो भने, प्रत्येक आईटमलाई पृष्ठ नम्बरको साथ होशियारीपूर्वक ट्याग गरिएको छ।
Handcraftted साबुन - पृष्ठ।
एक Westworld नि: शुल्क पेय टोकन - पृष्ठ।
ग्लोसियर छाला साल्भ - पृष्ठ।
भरिएको हात्ती - पृष्ठ।
ठीक छ, अब म पेचीरहेको छु र पहिले नै अनुक्रमणिका, शब्दावली, र लेबल पृष्ठहरू मार्फत फ्लिप गर्दैछु। र, म पुस्तक खोल्दै गर्दा, म मार्कबाट यो अद्भुत, व्यक्तिगत हस्ताक्षर नोट पाएँ:
साथै, त्यहाँ एक व्यक्तिगत नोट र मेरो ल्यापटपको लागि मार्केटिंग विद्रोही स्टिकरको साथ एक कार्ड छ।
सरल… मार्कले पूर्ण रूपमा मलाई चुस्नुभयो!
तर मार्कले यो गरेर के हासिल गरे आफैमा यो एउटा पाठ हो। म तपाईंसँग मार्कको पुस्तक साझेदारी गर्दैछु, तर उनले मलाई नड्जको साथ उत्साहित गरे।
किन यो पुस्तक आलोचनात्मक छ?
मेरो नयाँ ग्राहकले मलाई उनीहरुलाई लागु गरेको रणनीतिको बारेमा सोधे। तिनीहरूको बिक्री टोलीले संभावनाहरू पहिचान गर्दछ, तेस्रो पक्षहरूबाट उनीहरूको ईमेल ठेगानाहरू प्राप्त गर्नेछ, र तिनीहरूलाई परिचयात्मक ईमेलहरूको श्रृंखला स्वचालित गर्दछ। उनीहरूले मलाई कम क्लिक-थोरै दरहरू र उनीहरूको समग्र वितरणको बारेमा चिन्तित रहेको बताए। मैले तिनीहरूलाई भनें कि उनीहरू हुनु पर्छ ... र तिनीहरूले यी कम्पनीहरूको स्प्यामिंग रोक्न आवश्यक छ। तिनीहरू प्यारा सम्भावनाहरू थिए, ती प्यारो थिएनन्।
मार्कको घोषणापत्रमा, यो नियम # १ हो:
ग्राहकहरूले घृणा गर्छन् के गर्न बन्द गर्नुहोस्।
मानव-केन्द्रित मार्केटिंगको लागि घोषणापत्र
हामी कम्पनी भित्र अब रणनीतिक परिवर्तन को एक श्रृंखला को माध्यम बाट काम गरीरहेका छौं, ती सबै निर्माण विश्वास को आधार मा निर्मित छन् र तिनीहरूले पहिले नै आफ्नो ग्राहकहरु संग स्थापित गरेको सराहना दोहन। हामी कम्पनी हुनको लागि सारिरहेका छौं मानव.
म केवल बाटो हुँदै छु मार्केटिंग विद्रोह, तर उहाँसँग बोल्दा, म अब बुझ्छु कि किन उनी यस पुस्तकको महत्त्वको बारेमा यत्तिको उत्तेजित छन्। अनुसन्धान, अन्तर्दृष्टि, र केस स्टडीहरूले तपाईंलाई विगत केही दशकहरूमा धकेल्दै आएको प्रत्येक पाठको जग नै हल्लाउनुपर्दछ।
यो धेरै आवश्यक विद्रोह हो र यो पोष्ट म फ्ल्याग बढाउँदैछु र परिवर्तनलाई ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दैछु।
के मार्केटिंग विद्रोह तपाईंलाई सिकाउँछ
कसरी प्रलयकारी उपभोक्ता प्रवृत्तिहरू १०० वर्ष पहिले सुरु भएको क्रान्तिको पूर्वानुमानजनक नतिजा हो।
किन व्यवसायहरू परम्परागत विज्ञापनको सट्टा उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न मार्केटिंग गतिविधिहरूमा निर्माण गर्नुपर्दछ।
सफल मार्केटिंग रणनीतिको मुटुमा पाँच लगातार मानवीय सत्य।
किन ग्राहकको वफादारी र बिक्री फनेल मरिरहेका छन् र तपाइँ अहिले यसको बारे के गर्न आवश्यक छ।
तपाईंको उत्तम ग्राहकहरूलाई तपाईंको मार्केटिंग गर्न कसरी मद्दत गर्ने।
कुनै पनि आकारको व्यवसायहरूको लागि तत्काल कोर्स-सुधार गर्न क्रियात्मक कदमहरू।
मर्कलाई साथीलाई बोलाउन म कृतज्ञ छु र तुरून्त तपाईंलाई यो किताब तुरुन्त उठाउन सिफारिस गर्दछु। तपाईं आफ्नो मार्केटिंग प्रयासमा एक तत्काल र नाटकीय प्रभाव गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
मार्केटिंग विद्रोहको बारेमा थप पढ्नुहोस्
टैग: मार्क स्चेफरबजार विद्रोह